41 “Nọrọnụ jụụ gee m ntị, unu agwaetiti;+ ka mba dị iche iche+ nwetaghachi ike. Ka ha bịa nso.+ Ka ha kwuo okwu n’oge ahụ. Ka anyị bịakọta ọnụ maka ikpe ikpe.+ 2 “Ònye kpaliri otu onye nke si n’ebe ọwụwa anyanwụ?+ Ònye kpọrọ ya n’ezi omume ka ọ bịa na-ejere Ya ozi, ka o wee nyefee ya mba dị iche iche, meekwa ka ọ gaa na-emeri ọbụna ndị eze?+ Ònye nọ na-enyefe ha n’aka mma agha ya ka o gbuo ha, ha wee dị ka uzuzu, o wee jiri ụta ya gbajasịa ha, ha wee dị ka ahịhịa ọka nke ifufe na-ebugharị?+ 3 Ònye nọ na-achụ ha ọsọ, jiri ụkwụ na-agafe n’ụzọ ọ na-esighị bịa n’enweghị nsogbu? 4 Ònye nọ na-arụ ọrụ+ ma mee ihe a, na-eme ka ọgbọ dị iche iche dịrị site ná mmalite?+ “Ọ bụ mụ onwe m, Jehova, bụ́ Onye Mbụ;+ abụkwa m otu onye ahụ n’ebe ọgbọ ndị ikpeazụ nọ.”+ 5 Agwaetiti+ niile hụrụ ya tụwa egwu. Nsọtụ niile nke ụwa malitere ịma jijiji.+ Ha bịara nso ma na-abịa. 6 Onye ọ bụla wee na-enyere ibe ya aka, otu onye ana-asịkwa nwanne ya: “Dị ike.”+ 7 Omenkà wee na-eme ka onye na-eji ígwè akpụ ihe dịrị ike;+ onye na-eji hama e ji akpụ ụ́zụ́ eme ka ihe kwọọ mụrụmụrụ wee na-eme ka onye na-akụ ihe n’osiama dị ike, na-ekwu banyere ebe e jikọtara ya, sị: “Ọ dị mma.” N’ikpeazụ, e ji ntu kụgide ya ka o wee ghara ite kweke kweke.+ 8 “Ma gị onwe gị, Izrel, bụ ohu m,+ gị onwe gị, Jekọb, bụ onye m họọrọ,+ mkpụrụ Ebreham+ bụ́ enyi m;+ 9 gị onye m jidere aka site na nsọtụ niile nke ụwa,+ gị onwe gị kwa, bụ́ onye m kpọworo ọbụna site n’ime ime ụwa.+ M wee sị gị, ‘Ị bụ ohu m;+ ahọrọwo m gị,+ ajụghị m gị ajụ.+ 10 Atụla egwu, n’ihi na m nọnyeere gị.+ Elegharịla anya n’ụjọ, n’ihi na abụ m Chineke gị.+ M ga-eme ka ị dị ike.+ M ga-enyere gị aka.+ M ga-eji aka nri m+ nke ezi omume+ jidesie gị ike.’ 11 “Lee! Ihere ga-eme ndị niile na-eweso gị iwe, a ga-emechukwa ha ihu.+ Ndị na-esesa gị okwu ga-adị ka ihe efu, ha ga-alakwa n’iyi.+ 12 Ị ga-achọ ha, ma ị gaghị ahụ ha, bụ́ ndị na-alụso gị ọgụ.+ Ha ga-adị ka ihe na-adịghị adị na ihe efu,+ ya bụ, ndị na-ebuso gị agha. 13 N’ihi na mụ onwe m, bụ́ Jehova Chineke gị, sekpụ gị n’aka nri gị.+ Ọ bụ m bụ Onye na-asị gị, ‘Atụla egwu.+ Mụ onwe m ga-enyere gị aka.’+ 14 “Atụla egwu, gị idide+ bụ́ Jekọb, unu ndị Izrel.+ Mụ onwe m ga-enyere gị aka,” ka Jehova kwuru, bụ́ Onye Mgbapụta gị,+ Onye Nsọ Izrel. 15 “Lee! Emewo m ka ị bụrụ ihe e ji eticha mkpụrụ,+ ngwá ọrụ dị ọhụrụ nke nwere ezé n’akụkụ ya abụọ, nke e ji eticha mkpụrụ. Ị ga-azọda ugwu ukwu dị iche iche, zọriekwa ha; ị ga-emekwa ka ugwu nta dị iche iche dị ka igbogbo ọka.+ 16 Ị ga-afụcha+ ha, ifufe ga-ebufukwa ha,+ oké ifufe ga-efesasị ha.+ Gị onwe gị ga-aṅụrịkwa ọṅụ n’ime Jehova.+ Ị ga-anya isi n’Onye Nsọ Izrel.”+ 17 “Ndị ọ na-enweghị ka ọ hà ha na ndị ogbenye na-achọ mmiri,+ ma mmiri adịghị. Ire ha akpọwo nkụ+ n’ihi agụụ mmiri.+ Mụ onwe m bụ́ Jehova ga-aza ha.+ Mụ onwe m, bụ́ Chineke Izrel, agaghị ahapụ ha.+ 18 M ga-eme ka osimiri si n’elu ugwu nke ọhịa na-adịghị na-agbapụta, meekwa ka isi iyi si na ndagwurugwu* na-agbapụta.+ M ga-eme ka ala ịkpa ghọọ ọdọ mmiri nke ahịhịa amị jupụtara, meekwa ka ala mmiri na-adịghị ghọọ isi mmiri.+ 19 M ga-eme ka osisi sida na osisi akeshịa na osisi metụl na osisi mmanụ dịrị n’ala ịkpa.+ M ga-eme ka osisi junipa na osisi ash na osisi saịpres dịrị na mbara ọzara n’otu mgbe ahụ;+ 20 ka ndị mmadụ wee hụ ma mata, ṅaakwa ntị ma ghọta n’otu mgbe ahụ na ọ bụ aka Jehova mere ihe a, na ọ bụkwa Onye Nsọ Izrel mere ya.”+ 21 “Werenụ okwu ikpe unu bịa,”+ ka Jehova kwuru. “Kwuonụ ihe unu nwere ikwu,”+ ka Eze nke Jekọb kwuru.+ 22 “Werenụ ya bịa ma kọọrọ anyị ihe ndị gaje ime. Ihe mbụ niile merenụ—kọọnụ ha, ka anyị chebara ha echiche wee mata ọdịnihu ha. Ma ọ bụ, mee ka anyị nụ ọbụna ihe ndị gaje ime.+ 23 Kọọnụ ihe ndị gaje ime mgbe e mesịrị, ka anyị wee mata na unu bụ chi.+ Ee, unu kwesịrị ime ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ, ka anyị wee legharịa anya hụ ya n’otu mgbe ahụ.+ 24 Lee! Unu bụ ihe na-adịghị adị, ihe unu rụpụtara bụkwa ihe efu.+ Onye ọ bụla nke họọrọ unu bụ ihe arụ.+ 25 “Akpaliwo m otu onye nke si n’ebe ugwu, ọ ga-abịakwa.+ Ọ ga-esi n’ebe ọwụwa anyanwụ+ kpọkuo aha m. Ọ ga-abịakwasị ndị osote onye na-achị achị dị ka à ga-asị na ha bụ ụrọ,+ dịkwa ka ọkpụite nke na-azọ ájá ụrọ. 26 “Ònye kọtụworo ihe ọ bụla site ná mmalite, ka anyị wee mara, ma ọ bụ site n’oge gara aga, ka anyị wee sị, ‘O kwuru eziokwu’?+ N’ezie, ọ dịghị onye kọrọ ya. N’ezie, ọ dịghị onye na-eme ka a nụrụ ya. N’ezie, ọ dịghị onye na-anụ okwu unu.”+ 27 E nwere onye mbụ, nke na-asị Zayọn: “Lee! Ha nọ ebe a!”+ m ga-emekwa ka Jeruselem nwee onye na-eweta ozi ọma.+ 28 M nọ na-ele, ma ọ dịghị onye m hụrụ; ọ dịghị onye ọ bụla n’ime ha na-enye ndụmọdụ.+ M wee na-ajụ ha ajụjụ, ka ha zaa m ya. 29 Lee! Ha niile bụ ihe na-adịghị adị. Ọrụ ha bụ ihe efu. Ihe oyiyi ha a wụrụ awụ bụ ifufe na ihe na-enweghị ihe ha bụ.+